အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ချမ်းသာခြင်း အကြောင်းတရား
24 Responses to “ချမ်းသာခြင်း အကြောင်းတရား”
စိတ်ချမ်းသာမှ ဥစ္စာချမ်းသာမည်...ဆိုသလိုပေါ့ မချောရယ်..။
လာလောဆယ် ကိုယ်ကမကျန်းမာသေးတော့ စိတ်လည်းမချမ်းသာနိုင်သေးဘူး..၊
အလွန် အဖိုးတန်ပြီး အနှစ်သာရ ပြည့်ဝတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ အင်း... ကျွန်မ အတွက်ကတော့ အချက် ၁၊ ၂၊ ၃ တွေနဲ့ အခု ချမ်းသာနေတယ်း) အချက် ၇ နဲ့ ချမ်းသာအောင် ကြိုးစားရဦးမယ်။
၁ ၂ ၃ ၇ (ကြိုးစားဆဲ)
ဟဲဟဲ ရွှေချော တာ့တာ
ရွှေချောလို့ခေါ်တာ ဘူလဲ သိမှာပါနော် မပြောတော့ဘူး တာ့တာ
မောင်ချမ်းသာကို ရ၍ ချမ်းသာ ရခြင်း၊ (နာမည်= ချမ်းသာ):D
ပို့စ်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါလည်း ချမ်းသာတဲ့ စာရင်းထဲပါနေပါလားဆိုပြီး ပျော်သွားတယ်။ မျှဝေမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ မမချောရေ။
နံပတ် (၅) အချက်ကလွဲပြီးကျန်တာတွေတော့ ချမ်းသာတယ် :)
အင်းးးး အဲ့လိုဆို ညီမလေးလဲ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ ထဲမှာ ပါတယ် .. ငွေတော့ မဟုတ်ဘူး စိတ်း))
အချက် ၁ နဲ့ ၃ ကျနော့်မှာ ရှိထားတယ်ဆိုတော့ လောလောဆယ် လတ်ထဲ တစ်ဘတ်မှမရှိလည်း ကျနော်က လူချမ်းသာပေါ့ နော့် အစ်မး)
တစ်ခါတစ်လေ ဖော်ပြပါ(၇)ချက်အားလုံးနီးပါး ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း
အဲဒီ(၇)ချက်လုံး ကိုယ့်ဆီက ရှောင်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့
"ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ခြင်း"ဆိုတဲ့အချက်လေး ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်......?
လောလောဆယ်တော့ ၁၊၂၊၄၊၇ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်နေတယ်။ ဒီလိုချမ်းသာနေတယ်။ကြာဇံချက်ကတော့ ကောင်းမှကောင်းပါ။ စလုံးကို အလုပ်ပြောင်းလာရင် ချက်ကျွေးမယ်နော်..
ပိုက်ဆံမရှိတာကလွဲရင် ကျန်တာတွေ အကုန်ချမ်းသာတယ် မမရေ... :P
ပို့စ်ကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ပိုက်ဆံမရှိတိုင်း ဒီလိုစာတွေများများဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးရမယ် :)
လူသားတယောက်ဟာ သူ့အသက်အရွယ်အလိုက် ၊ သူ့ရဲ့ ဘ၀၊အမြင် နှင့် ကိုက်ညီတဲ့ ခံယူချက် (သို့) ရည်မှန်းချက်ဟာ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းသူလူမွဲတယောက်နှင့် ချမ်းသာသောဒုက္ခိတ တယောက်အတွက် အကြောင်းတရား (၂) နှင့် (၅) ဟာ အလေးထားပုံချင်းမတူသလို ထိုလူနှစ်ဦးကို နေရာလဲလိုက်ပါက ယ္ခင်က အမြင်နှင့် ခံယူချက်လည်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ယေဘူယအားဖြင့် ဤ အကြောင်းတရား (၇)ချက်ကို ” သင် အောင်မြင်ပြီလား ? ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းတခုထည်းနဲ့ အစားထိုးပြီး ကိုယ်တိုင်မှတ်ကျောက်တင် လို့ရပါတယ် ။ အကယ်၍ သင်ဟာ ” လုပ်ချင်ကိစ္စ၊ ကြိုက်တဲ့အချိန် (ထ)လုပ်လို့ရ ၊ တနည်းအားဖြင့် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ နှိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေ ” ရင် သင်ဟာ အောင်မြင်နေပါပြီ ။
အပေါ်က khun ပြောသွားသလိုပဲ.. ဟိဟိ
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်မှပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချမ်းသာတဲ့လူပါလားဆိုပြီး တော်တော်လေးကို စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ အစ်မချောကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ တို့အစ်မလည်း ချမ်းသာခြင်း ( ၇ ) မျိုးလုံးနဲ့ ပြည့်စုံပါစေနော်...။
အခုမှပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တော်တော်ချမ်းသာမှန်း သိတော့တယ်။ နံပါတ်(၅)ပဲမရှိတာ၊ ကျန်တာအကုန်၇ှိတယ်....ဟဲဟဲ...
ချမ်းသာတယ် ချမ်းသာတယ် (မှတ်သိစိတ်လေးနဲ့ပေါ့) မအားတဲ့ကြားက လာခဲ့တယ်... ချောပုံလေးထင်လို့ ဟီဟိ။ နောက်မှ သေချာလာဖတ်တော့မယ်။ တစ်လလုံးမအားတော့ဘူးနော်။ မလာနိုင်ရင် ချိတ်ချိုးနဲ့ :P
(၇)ချက်မှာ (၁)ချက်ကတော့ မပြည့်တပြည့်။ (၂) ချက်ကတော့ ဆုတောင်းယူရဦးမယ်။ (၄)ချက်က ပြည့်ပြည့်၀၀ချမ်းသာနေတယ်။ အဲ..အဲ့ဒီ(၄)ချက်အတွက်တော့ ၀မ်းသာနေမိတယ်။ ငါကွ.....! ..။ :)
မှတ်သားလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ချစ်မရေး)
ကောင်းလိုက်တဲ့ထောက်ပြကွက်ကလေးပါပဲ။
အဲ့ ဒီအချက်တွေ အားလုံးပြည့် စုံဘို့ တော့ 
သိပ်မလွယ် အဲ လွယ်ကိုမလွယ်တာပါ။
ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့ချမ်းသာချင်ရင်
“ ရောင့်ရဲ ” တဲ့ ။
မချောရေ .. ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတရား ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာသွားပါတယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာအရမ်းကြီးမဆင်းရဲပါလားလို့ မြင်သွားတယ်၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
၇ ချက်လုံးမပြည့်တောင် ၄ ၊ ၅ ချက်လောက် ပြည့်အောင်တော့ ကြိုးစားသင့်တယ်။ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမတာပါ)